Antananarivo sy ny manodidina: tsy voavaha ny olan’ny famatsian-drano | NewsMada
Antananarivo sy ny manodidina: tsy voavaha ny olan’ny famatsian-drano
Eo am-panitarana ny toby famatsian-drano eny Mandroseza, ary tokony ho vita afaka volana vitsy. Etsy ankilany, misy ny fotodrafitrasa vitsivitsy naorina eto an-dRenivohitra, toy ny eny Andohatapenaka, ohatra. Na izany aza, tsy nahavaha ny tsy fahampian’ny tosiky ny rano izany. Efa hatramin’ny taona 2019 ny naorina ny tobin-drano eny Amoronankona, hiantoka sy hanatsara ny famatsian-drano any amin’ny tapany atsinanan’ny Renivohitra, saingy tsy mety vita hatramin’izao satria misy mamoaka rano foana ireo fantson-drano.
Nilaza koa ny depiote voafidy teny Atsimondrano, tao amin’ny radio tsy miankina iray, omaly, fa tsy araka ny nantenaina azy ny toby siniben-drano eny Ankadivoribe satria tsy maharaka, tsy ampy ny rano mamatsy azy, izay tokony hanatsara ny famatsian-drano eny amin’ny tapany atsimon’Antananarivo. Marihina fa efa tamin’ny andron’ny filoha teo aloha, Rajaonarimampianina ny nananganana azy io, saingy izao tsy mandeha araka ny tokony ho izy izao.
Santionany ihany ireo, ilazana fa tsy hivaha ato ho ato ny olan’ny famatsian-drano eto Antananarivo sy ny manodidina. Na izany aza, misy ny fiantsoana ireo teknisianina afrikanina tatsimo, mijery ny fantson-drano simba na antitra. Efa misy koa ny vola avy amin’ny Vondrona eoropeanina (UE) sy ny Banky eoropeanina ho an’ny fampiasam-bola (BEI); hanatsarana ny fotodrafitrasan’ny rano eto an-dRrenivohitra.